एउटा रुट परमिट लिएर चाडवाडमा देशैभर सार्वजनिक बस चलाउन पाइने | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
एउटा रुट परमिट लिएर चाडवाडमा देशैभर सार्वजनिक बस चलाउन पाइने
प्रकाशित मिति १३ आश्विन २०७६, सोमबार ११:५८ लेखक Sabita Roka
काठमाडौँ । सार्वजनिक सवारी साधनलाई आइतबारबाट देशभर इजाजत पत्र (रुट परमिट) खुला गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रुट परमिट खुला गरेको हो । त्यस्तै १० चक्केभन्दा ठूला सवारी साधनलाई काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । विभागले असोज ७ गते सूचना जारी गर्दै रुट परमिट खुला र मालवाहक ठूला साधनलाई राजधानी प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
रुट परमिट खुला भएपछि पूर्वमा चल्ने गाडीले पश्चिम वा जुनसुकै ठाउँमा पनि यात्रु बोकेर जान पाउनेछन् । रुटमा रोकतोक हुने छैन । ‘यसरी चल्ने गाडीले कुनै एउटा रुटको परमिट भने पहिल्यै लिएको हुनुपर्नेछ, रुट नलिई गाडी चलाउन पाइँदैन,’ विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, ‘१० चक्के र योभन्दा ठूला ट्रक, ट्र्रेलर, लरी सबैलाई चितवनबाटै रोकेका छौं ।’ उनका अनुसार पहिल्यै सूचना जारी गरिएकाले चाप कम छ । चितवनमा रोकिने मालवाहक गाडी कम भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
खाद्यान्न, औषधि, कुहिने सामान, खसीबोका बोकेर आउने साधनलाई रोकिने छैन । निर्माण सामग्री बोकेर आउने १० चक्केभन्दा ठूला सवारी साधनलाई मात्र रोकिनेछ । ‘चाडबाडको समयमा जाम हुन नदिन यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने । जामको समस्या नागढुंगा-नौबिसे खण्डमा बढी छ । अरूतिर ठूलो समस्या छैन । जाम बढी हुने यो खण्डबाट भित्रिने मालवाहक साधनलाई मात्र प्रवेश निषेध गरिएको हो ।
सबैभन्दा बढी जाम यही खण्डमा हुन्छ । सडक उकालो छ । क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेर आउने साधनले गर्दा जाम हुँदै आएको छ । यो खण्ड भएर दैनिक ८ हजारभन्दा बढी सवारी साधन ओहोर-दोहोर गर्छन् । दसैंमा यो संख्या दोब्बर हुन्छ ।‘व्यावहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै रातको समयमा जाम नहुने अवस्था आयो भने छाडिनेछ,’ उनले भने, ‘जाम हुने अवस्था आए रोकिनेछ ।’ नागढुंगा-नौबिसे सडक शनिबारबाट सहज भएको छ । ‘अहिलेलाई १९ गतेसम्म यो नियम लागू हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसको दुरुपयोग हुन्छ भनेर समय निर्धारण गरेका हौं, माग आएमा समय थप्न तयार छौं ।’
उनले नागढुंगादेखि नौबिसेमा दसैंसम्ममा सडक राम्रो बन्ने दाबी गरे । ‘ठूलो समस्या नागढुंगा खण्डमै देखिएको हो, यो समस्या समाधान हुँदै जानेछ,’ उनले भने, ‘अर्को समस्या भनेको ग्रामीण क्षेत्रका सडकमा देखिएको छ, त्यहाँ पनि स्थानीय तहले मर्मतको काम गरिरहेका छन् ।’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालका अनुसार असोज ५ गते टिकट बुकिङ खुला भएयता ८० हजार ३ सय ४१ सवारी साधन राजधानी भित्रिए भने ८८ हजार ८० सवारी साधन बाहिरिएका छन् ।
सुमार्गीको रकम फर्काउन सकिन्न : वाणिज्य बैंकहरू
काठमाडाैं । व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको रकम फिर्ता गराउन नसक्ने वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सुमार्गीको…
समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई ‘बिदा’, स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोज्न ४५ दिने सूचनासमेत जारी !
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश…
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने क्रममा सहअध्यक्ष प्रचण्डलाई सबैभन्दा ठूलो भाग मिलेपछि उनले आफू…
कति तलब पाउँछन् आईपिएलका चीयरलिडर्सले ?
एजेन्सी । आईपिएलमा ग्ल्यामर बढाउन अन्य खेलमा झै चीयरलिडर्सको भुमिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। म्याचको क्रममा चौका, छक्का अनि विकेटमा चीयरलिडर्सको…
काठमाडाैँ । प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका कुख्यात गुण्डा मनोज पुनको संगठित अपराधमा माओवादी र युवा संघका युवा नेता तथा व्यवसायीकै…
काठमाडौं । अहिलेसम्मका सबै कर फर्स्यौट आयोग पानी माथिका ओभाना भएको हो ? भन्दै चर्चाको विषय बन्न थालेको छ…